भक्तपुरमा कोरोनाको खतरा बढ्ने आसंका गर्दै आजबाट लाग्नु भयो यस्तो नियम ! – Online Nepal Site
1,1662minutes read
रमेश गिरी – कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अवधिमा पनि गाउँगाउँमा नयाँ मान्छे आउन थालेपछि विभिन्न ठाउँका नाका बन्द गरिएका छन् । सूर्यविनायक नगरपालिकाको परोपकार शहरी स्वास्थ्थ केन्द्रबाट दधिकोट जाने मुख्य सडकमा सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाएको छ ।
सडकमा बाँसको तगारो राखेर सूचना टाँस गर्दै नयाँ मान्छेलाई प्रवेश निषेध गर्नुका साथै सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यो सडकमा दुई सातादेखि नै रोक लगाएको हो । नयाँ मान्छेको ओहोरदोहोर बढेपछि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको भन्दै स्थानीयवासीले लकडाउनका समयमा नयाँ मान्छे र जथाभावी सवारीसाधनको आवतजावत रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको स्थानीयवासी सुरेश खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
दार्चुला घटनाबारे भारतलाई पठाएको कुटनीतिक नोटमा के छ ?
खुसीकाे खबर, अन्ततः सार्वजनिक यातायात चलाउने मिति घाेष णाा, बल्ल चल्ने भए बसहरु..
काठमाडौमा पानीको जारमा किरा भेटियो
सलमान खानका फ्यानहरुका लागि दु:खद खबर